Fursadaha Shaqada - El Centro de la Raza
Kaalay ku biir kooxdayada oo taageer himilada iyo aragtida El Centro de la Raza!
El Centro de la Raza, shaqaalaheena waxaa ku mideysan dareenkooda ku aaddan caddaaladda bulshada iyo u heellanaanta bixinta barnaamijyo iyo adeegyo tayo sare leh bulshadeena. El Centro de la Raza waxay siisaa fursado shaqo shaqooyin kala duwan oo xirfado ah waxayna siisaa faa'iidooyin iyo fursado kale si ay u koraan shaqsi ahaan iyo xirfad ahaanba. El Centro de la Raza furitaankiisa hadda ayaa hoos ku taxan.
Si aad boos furan uga codsato El Centro de la Raza, fadlan halkan ku buuxi codsigayaga shaqo onlaynka ah. Ama, haddii aad doorbidayso, waxaad soo diri kartaa resumeygaaga, warqadda daboolka iyo a codsi shaqo oo dhameystiran ilaa HR@elcentrodelaraza.org.
Macallinka Waxbarashada Carruurnimada Hore
Navigator Ilaha Qoyska
Soo-dhoweeyaha/ Xog-hayaha iyo Kaaliyaha Gudbinta
Horjoogaha Hoggaaminta Waxbarashada Carruurnimada Hore
Macallinka STEM xagaaga (Temp)
Barnaamijka Tababarka U Diyaargarowga Shaqooyinka Dhallinyarada – Macallin
Iskuduwaha Barnaamijka Tababarka U Diyaargarowga Shaqooyinka Dhalinyarada
Dhacdooyinka Gaarka ah & Maareeyaha Masuulka
Bebes! Booqashada Guriga ee BSK
La-taliyaha Guriyeynta ka-hortagga la wareegidda
Macallinka Fanka Luuqadda xagaaga (Temp)
Maareeyaha Kiis ee Barnaamijka Tababarka Kahor Dhallinta
Iskuduwaha Barnaamijka Tababarka Ka Hor ee Dhalinyarada
Meelaha Kale ee Furan:
Macallinka Fasalka Karinta La Cocina
Macallin - Bedel
Shuruudaha Tallaalka Covid-19:
Dhammaan shaqooyinka El Centro de la Raza waxay ku xiran yihiin Maamulka Magaalada Seattle iyo/ama shuruudaha (yada) degmada King ee qandaraaslayaasha si buuxda looga tallaalo COVID-19. Sida hay'ad dadweyne oo la falgasha dadweynaha, dhammaan shaqaalaheenna waa in la tallaalaa.
El Centro de la Raza waxay siisaa faa'iidooyinka soo socda shaqaalaha waqti-buuxa ah:
Caymiska Caafimaadka iyo Ilkaha oo leh shaqaale tartamaya iyo qiimayaasha qoyska.
Caymiska Nolosha Aasaasiga ah oo lagu siiyo lacag la'aan shaqaalaha; ikhtiyaar si aad ugu iibsato caymis dheeraad ah.
401 (k) qorshe leh 5% tabarruca loo shaqeeyaha; u -qalma ka -qaybgalayaasha kadib lix bilood oo shaqo ah; u -qalma tabaruca loo -shaqeeyaha ka dib sannadka ugu horreeya ee la shaqeynta El Centro.
12 maalmood oo ah wakhtiga mushaharka jirrada/nabadgelyada leh sannad kasta (oo ay ku korodhay muddada mushaharka); U qalma inuu qaato fasax la ururiyey ka dib 90 maalmood oo shaqo ah.
15 maalmood oo fasax ah oo ay ku ururtay muddada mushaharka; bilaabi wax-ururinta marka la kiraysto; u qalma in uu qaato 6 bilood ka dib oo shaqo ah oo lagu daray fasax sabbaynaya iyo fasax dhalasho.
9 maalmood oo fasaxyo lacag ah waxaa dejiyay El Centro de la Raza + 5 maalmood oo fasax ah oo fasax ah usbuuca ugu dambeeya ee Disembar.
Barnaamijka Kaaliyaha Shaqaalaynta ee dhammaan shaqaalaha EAP -gaagu wuxuu bixiyaa caawimaad xagga caafimaadka maskaxda, walbahaarka, murugada iyo lumitaanka, jirrada ama dhaawacyada, khilaafyada xiriirka, hagidda maaliyadeed, hagaajinta nolosha, iyo qaar kaloo badan.
Kaaliyaha Xarunta Fursada Ganacsiga
Kaaliyaha Barnaamijka Awood -siinta Maaliyadeed
Kaaliyaha Barnaamijka Unidos
Kaaliyaha U Diyaargarowga Shaqada Dhalinyarada
Kaaliyaha Barnaamijka Dugsiga kadib